Fifidianana: Nandefa iraka hanao tombana ny Vondrona Eoropeana
vendredi, 06 juillet 2018 18:16
Misy iraka mpisavalana avy amin’ny Vondrona Eoropeana tonga eto Madagasikara tamin’ny 29 jona lasa teo, iraka izay tarihin-dRtoa Concha Fernadez de la Puente.
Misy manampahaizana manokana telo, ny iray manampahaizana mikasika ny fifidianana, ny faharoa mikasika ny fitaovana na “logistique” ary ny fahatelo momba fandriampahalemana miaradia aminy, tonga hanao tombana ny zavatra azo atao sy mety ilana ny fanaraha-maso ny fifidianana hatao eto Madagasikara.
Nitsidika ara-pomba fifanajana ny filohan’ny Antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza izy ireo omaly. Tsy eto an-toerana moa Atoa Rakotomamonjy Jean Max fa any Canada mamonjy fivorian’ny Assemblée Parlementaire de la Francophonie na APF, ka ny filoha lefitra faritany Antsiranana Mahazoasy Freddie sy ny filoha lefitra faritany Fianarantsoa Hary Andrianarivo no nandray azy ireo.
Hijanona eto Madagasikara hatramin’ny 17 jolay 2018 ireto manampahaizana manokana na Experts nalefan’ny Vondrona Eoropeana ireto. Ny Vondrona Eoropeana izay vao avy nandrotsaka vola 1,7 tapitrisa euros mahery ao amin’ny kitapom-bola ho fanohanana ny zotram-pifidianana.